eNasha.com - देख्न नसकिएको अमेरिका
देख्न नसकिएको अमेरिका
- धीरज राई
हरकोही अमेरिका पुग्ने र त्यहीँ हराउने खबरले हिजोसम्म आश्चर्यमा पर्नेहरु अहिले छक्क पर्न छाडेका छन् । मलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो, हरकोही किन अमेरिकामा हराउन चाहन्छन् । आज मलाई मेरो अनुभव बताउन दिनुहोस्- अमेरिकामा त्यस्तो के छ, जुन नेपालमा छैन ।
मेरो अमेरिका जाने रहरलाई पपसङ्गीतले मेटायो । संसारका अधिकांश मानिसलाई अमेरिकाको ग्ल्यामरले नतानेको सायदै होला । पप यात्राको पन्ध्रौँ वर्षपछि सन् २००५ मा मलाई यो मौका हात लागेको थियो । करीब पाँच महिनाको समयमा पन्ध्र वटा राज्यहरुको भ्रमणका साथै त्यहाँका नेपालीहरुमाझ पप सङ्गीत प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्यो । फेब्रुअरी ८ तारिख २००५ मा शुरु भएको यो यात्रामा मलगायत सञ्जय श्रेष्ठ, सञ्जीव प्रधान, सरिष्मा अमात्य, हरिश माथेमा अनि अरु तीन जना वाद्यवादक साथीहरु थिए । गीतारमा भूपेन्द्र वज्राचार्य, कीबोर्डमा विमल बुढाथोकी अनि ड्रममा प्रवीण मानन्धर रहेको सो समूहमा म भने चर्चित हास्य कलाकार साम्दे शेर्पामार्फत् सम्पर्कमा आएको थिएँ । पूर्वमा न्यूयोर्कदेखि पश्चिममा सनफ्रान्सिस्कोसम्म अनि उत्तरमा मिनियापोलिसदेखि दक्षिण हस्टनसम्मको यात्रा गरियो । अमेरिकाको भौगोलिक स्थिति, त्यहाँको रहनसहन र संस्कृति, चालचलनलगायतका विषयहरुमा धेरै ज्ञान मिल्यो । 'अमेरिकामा पुगेपछि सकेसम्म नफर्कनू' भन्ने आग्रहप्रति असहमति जनाउँदै म नेपाल फर्किएको थिएँ ।
अमेरिका भन्ने बित्तिकै कम्तीमा नेपालीहरुले चाहिँ पैसासँग यसको सम्बन्ध जोड्छन् । म पनि प्रभावमा परेँ र यो मौकालाई अत्यधिक उपयोग गर्दै बढी से बढी आम्दानीमा जोड दिने मानसिकतामा पुगेँ । सुनौलो मौका, रोजगारी, भौतिक सामानहरुको उपभोग अनि आरामदायी जीवन नै मानव जातिका लक्ष्य हुन् भन्ने प्रायःले ठान्छन् । अमेरिकालाई 'पग्ल्याउने भाँडो' भन्नुको कारण यही नै रहेछ । जतिजति कार्यक्रमहरु हुँदै गए, उतिउति अमेरिकाको आकर्षणले मलाई पनि तान्दै लग्यो । स्वतन्त्रता, सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, सुनिश्चित भविष्य अनि त्यहाँका नेपाली साथीभाइहरुको आग्रहले ममा मानसिक दवाव पर्दै गयो कि म पनि अमेरिकामा नै हराउँ कि ! नेपालसँग तुलना गर्दागर्दै म पनि नजानिँदो किसिमले यसको आकर्षामा तानिँदै गएको थिएँ । वैँसमा ह्वात्त आउने जवानीझैँ सुरुका दुइ महिनासम्म अमेरिकाको आकर्षणले आँखा ढ्याप्पै छोप्यो तर समयसँगै गहिराईमा पुग्दा भने त्यो भ्रम हट्यो । त्यहाँको संस्कृति, दैनिक जीवन, पारिवारिक वातावरण अनि संस्कारसँग मिल्न नसकिने महसूस भयो । नेपालमा आफ्नो अस्तित्व, श्रीमती, आमा-बुवा अनि साथीसंगीहरुको सम्झनाले नेपालमै फर्कायो ।
सहरै सहरको कल्पना गरे तापनि अधिकांश भाग त्यस्तो नरहेको मैले पाएँ । पूँजीवादी भनिए तापनि साम्यवादीको स्पष्ट झलक अमेरिकामा देखियो । १० देखि १८ घण्टासम्मको कठोर शारीरिक परिश्रम नगरेसम्म बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ । चर्को घरभाडा, यातायात खर्च, विमा, बिजुली-पानी, टेलिफोन आदिको खर्चले गर्दा आम्दानी कतिबेला चुहिँदो रहेछ, पत्तै नहुँदो रहेछ ! आफ्नो देशको पैसा बाहिर नजाओस् भन्ने सोचाईले अमेरिका अघि बढेको देखियो । अत्यधिक श्रमले गर्दा मेरा अधिकांश साथीहरु उमेरभन्दा निकै गुणा बढी प्रौढ देखिए । सानोतिनो बिमारी सजिलै पचाइदिन सक्ने देखेर म छक्क परेँ । कालाहरुसँग डराउँदै अनि बच्दै अधिकांश नेपालीहरुले पेट्रोल पम्पमा काम गरेको देखेँ । त्योभन्दा बढी त्यहाँको पारिवारिक संस्कारसँग म सहमत हुन सकिनँ ।
पाँच वर्षो उमेरमा बच्चाबच्चीलाई अलग्गै सुताउन नेपाली आमाबाबुलाई गाह्रै पर्छ । काखमा खेल्दै नहुर्किएको बच्चाको सम्बन्ध बाबुआमाबीच प्रगाढ हुन सक्दैन । भावनात्मक भन्दा बढी स्वार्थमा अडिएको त्यहाँको वैवाहिक सम्बन्ध मलाई पच्न सकेन । सम्बन्ध विच्छेद अनि उदार यौन अत्यधिक हुने अति खुला समाजसँग मेरो मिल्न गाह्रो भयो । आफ्नो मनलाई मारेर सम्झौता गर्न गाह्रो नै पर्छ । एउटा संयुक्त परिवारमा हुर्केकी नेपाली आमा अठार वर्षपुगेपछि घर छाडेर जान्छु भन्ने छोरा देखेर कसरी खुसी हुन सक्छे ? बुढेसकालमा छोराछोरीको साथ छाडेर वृद्धाश्रममा बस्नुको पीडा बेग्लै हुन्छ । वर्षमा मुस्किलले एक पटक छोराछोरीले ल्याइदिएको फूलको झुप्पा माया नभई तीखो काँडा बन्न पुग्छ ।
अमेरिकामा विशेष गरी तीन थरिका सांगीतिक पारखीहरु देखिए । पहिलो समूहमा विद्यार्थीहरु थिए । अर्कोमा 'फेमिली'हरु थिए । तेस्रोमा चाहिँ डीभी परेर आएका नेपालीहरु थिए । विद्यार्थीहरु तथा युवाहरु वेर्स्र्टन पपको 'क्रेज' देखियो भने परिवारवालाहरु तथा डीभी परेर जानेहरुले भने लोकपप बढी रुचाए । कतिपय भने नेपाली कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेर आएका थिए । सञ्जय श्रेष्ठको माया मेरी माया, हरिश माथेमा आँखाको नानी अनि मेरो तिमी रुँदा एक्लै हुँदा त्यहाँका युवाहरुमा चर्चित रहेछ । परिवार तथा डीभी समूहले चाहिँ सञ्जीवको देउरालीको चौतारीमा र मेरो सोइ ढाले सोई बढी रुचाए । गायिका सरिष्मालाई पनि दर्शकहरुले प्रोत्साहनसहितको माया दिए । कार्यक्रममा गम्भीर गीतभन्दा नाच्न मिल्ने गानाहरुको माग बढी देखियो । न्यूयोर्कमा सबैभन्दा बढी दर्शक थिए (करिब एक हजार) भने बाँकी ठाउँमा तीन सय जनाको उपस्थिति थियो । गायक गायिकाहरुले सीडी बिक्रीमार्फत् अतिरिक्त आम्दानी पनि गरे । अमेरिकामा भने हिपहप सङ्गीत बढी लोकप्रिय रहेछ । केही नेपाली हिपहप गायकहरुले न्यूयोर्कमा आफ्ना गानाहरु प्रस्तुत गरे तर दर्शकहरुले नेपाली हिपहप त्यति पचाउन सकेनन् ।
नेपाली पपको लागि राम्रो स्थिति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरु भने खट्किँदो थियो । अमेरिकामा रहेका विभिन्न नेपाली संघसंस्थाहरुबीचको मनमुटाव अनि एकआपसमा खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्ति देख्दा अत्यन्त दुःख लाग्यो । एउटाले गरेको कार्यक्रममा अर्को नजाने र जान नदिने जस्ता कार्यले खल्लो महसूस गरायो । कला, सङ्गीतलाई समूह, जात, धर्म, देशले छोप्नु निश्चय नै राम्रो संकेत होइन ।
जेहोस्, अमेरिका नेपाली पप सङ्गीतका लागि अब्बल साबित भएको छ । तर त्यसका लागि पपकर्मीहरुले आफ्नो स्तर कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ । दर्शक तथा स्रोताहरुको मायालाई ऊर्जाको रुपमा लिई क्षणिक मात्र नहेरी दीर्घकालीन सोच राखी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
गायक विचार सङ्गीतकार लुकेका कुरा रिलिज ट्रयाक बाहिर समुद्रपार नेपाली तारा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड उपलब्धि भिडन्त पेज थ्री गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट हल्ला